पहिचार र अधिकारकोलागी मुस्लिम समूदायद्धारा आन्दोलनको चेतावनी
काठमाडौं, माघ १८। नेपाल मुस्लिम ईत्तेहाद संगठनले मुस्लिम समूदायले आदीबादी, जनजाती, दलित र मधेसी जस्तै छुट्टै अधिकार सहितको पहिचान दिन माग गरेको छ । संगठनले
संसद सचिवालय, परराष्ट्र र पुलिसले फसाएको सभासद रानाको आरोप
काठमाडौं,माघ १८। एमाले सभासद नारदमुनी रानाले आफूलाई कुटनीतिक राहदानी दुरुपयोग काण्डमा संसद सचिवालय, परराष्ट्रमन्त्रालयका कर्मचारी र प्रहरीको मिलेमतामा फसाईएको दावी गरेका छन् । हिजो रिपोर्टर्स क्लबमा
कानुन र संबिधान अनुसार काम नगर्ने सरकारले प्रेसलाई कुण्ठित गरेको आरोप : खनाल
धनगढी,माघ १७। एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले कानुन र संबिधान अनुसार काम नगर्ने सरकारले प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने काम गरेको बताएका छन् । मंगलवार बिहान धनगढीमा आयोजित पत्रकार
दाङ बन्दका कारण जनजिवन प्रभावित
दाङ, माघ १७। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यबृद्धि र लोडसेडिङबिरुद्ध जिल्ला युवा सञ्जालले मंगलबार दाङ बन्दको आह्वान गरेको छ । बन्दका कारण बिहानैदेखि जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको
सूचना लुकाउने निर्णय फिर्ता नलिए प्रधानमन्त्रीको हालत पनि ज्ञानेन्द्रको जस्तै हुने : पत्रकार महासंघका सभापति गाउँले
काठमाडौ,माघ १७। सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी विद्येयकलाई पंगु बनाउने गरी १४० किसिमका सूचना लुकाउने गरी गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता नभए प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको हालत पनि पूर्व
असारदेखि अबरुद्ध सोलुखुम्बुको काँगेल विमानस्थल पुन सुचारु
सोलुखुम्बु, माघ १७। असार महिना देखि अबरुद्ध सोलुखुम्बुको काँगेल विमानस्थलमा हिजोबाट सुचारु गरेको छ । नागरिक उड्यान प्राधिकरणले कर्मचारी व्यवस्था गर्न नसक्दा अवरुद्ध बनेको सो
जारि संसद अवरोध हटाउनका लागि सभामुखद्धारा प्रधानमन्त्री भट्टराई आग्रह
काठमाडौं,माघ १७। संसद अवरोध कायमै रहेपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले अवरुद्ध संसदलाई सूचारु बनाउन आज बिहानै प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईसंग भेट गरी केहि समय छलफल गरेको छन्
प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई कालो झण्डा
नगरकोट, माघ १७। नगरकोट नालदुम उत्सव उद्घाटनको लागि नगरकोट पुगेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई आज एमालेनिकट अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताले कालो झण्डा देखाएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा
सरकारले सूचनालाई गोप्य राख्ने निणर्यविरुद्ध पत्रकारहरु आन्दोलनमा
काठमाडौं, माघ १७। सूचना वर्गीकरण गरी गोप्य राख्ने सरकारी कार्यालयलाई उर्दी जारी गरेको विरोधमा आज पत्रकारहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल प्रेस युनियनले आज विहान सिंहदरवारको दक्षिण
माघ २९ गतेसम्मको समय थपपछि निर्धारित समयमा संविधान आउनेमा शंका
काठमाडौ, माघ १६ । संविधान लेखनका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन संवैधानिक समितिलाई माघ २९ गतेसम्मको समय थपिएपछि निर्धारित समयमा संविधान आउनेमा शंका उब्जन थालेको छ । संवैधानिक
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यबृद्धिको विरोधमा आन्दोलित १३ विद्यार्थी संगठनद्वारा थप कार्यक्रम सार्वजनिक
काठमाडौ, माघ १६ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धि विरुद्ध आन्दोलित १३ विद्यार्थी संगठनले संघर्षका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । आन्दोलनरत १३ विद्यार्थी संगठनको आइतबार राजधानीमा बसेको
आज शहिद दिवस, देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाइदै
काठमाडौं, माघ १६ । आज शहिद दिवस । प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते आप्नो प्राणको आहुती दिएका वीर शहिदको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । आज पनि
Date : 29 Jan 2012
अब नेपाली युवाहरु मलेसिया सुरक्षा गार्डमा जान पाउने
काठमाडौं, माघ १५। विगत दुई वर्षदेखि मलेसियाले नेपालीहरुलाई सुरक्षा गार्डमा लिन बन्देज गरेको थियो। अब भन्ने नेपाली युवाहरुले मलेसियामा त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने पाउने भएका छन् ।
सरकारी स्वामित्वको जग्गा हडप्न व्यक्तिहरुको चलखेल तिब्र भएको खुलासा
सुनसरी, माघ १५। करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी स्वामित्वको जग्गा हडप्न केही व्यक्तिले चलखेल गरेको रहस्य खुलेको छ । सुनसरीको इटहरी वडा नं ४ मा रहेको
त्रिविका कर्मचारीद्धारा क्याम्पस अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने चेतावनी
काठमाडौं,माघ १५। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी संघले त्रिवि व्यवस्थापनले आफूहरुको माग पुरा नगरेको भन्दै अधिराज्यका त्रिविका आङ्गीक क्याम्पसहरु अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने सहितका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
मोटरसाइलकबाट नै रक्तचन्द तस्करी गर्ने गरेको खुलासा
भक्तपुर, माघ १५। भक्तपुरबाट खासा लान लागिएको चालिस केजी रक्तचन्द सहित तीन जना गएराति काभ्रेको नालाबाट पक्राउ परेको छ। यसबाट थाहा हुन्छ कि तस्करीहरुले मोटरसाइलकबाट पनि तस्कर
जनसत्ताले गरेको निर्णय खारेज नभए भट्टराई नेतृत्वको सरकार ढल्ने : केसी
काठमाडौं, माघ १५। नेपाली काग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिह केसीले जनसत्ताले गरेको अबैद्य कारोवारलाई बैद्यानिकता दिने निर्णय खारेज नभए काग्रेसले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार
माओवादीका कारण संविधान नबन्ने खतरा बढेको : इश्वर पोखरेल
दाङ,माघ १५। नेकपा एमालेका महासचिब इश्वर पोख्रेलले माओवादीका कारण संविधान नबन्ने खतरा बढेको बताएको छ । प्रेस चौतारीले दाङमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा महासचिव पोखरेलले संविधान
सेनालाई विशेष समितिले गरेको निर्णय पालना गर्न निर्देशन : अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं,माघ १५। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लडाकूका डेपुटी कमाण्डर बोलाएर सेना समायोजन विशेष समितिले गरेको निर्णय पालना गर्न निर्देशन दिएका छन्। दाहाल निवास लाजिम्पाटमा आज बिहान भएको
माओवादीसँगको यो सात वुदे सहमती अन्तिम सम्झौता : कोईराला
दाङ,माघ १५। माओवादीले विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेसम्म उसलाई विश्वास गर्न नसकिने नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोईरालाले बताएको छ । दाङको मौरीघाटमा शहीद श्रीनारायण चौधरीको सालिक
काग्रेस र एमालेलाई सहमतिमा ल्याउछु : गच्छदार
विराटनगर,माघ १५। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले वर्तमान सरकार शान्ति र संविधान निर्माण गर्न कै लागी बनेकोले त्यो कार्य पुरा गरेर छाड्ने बताएकोछ । विराटनगर विमानास्थलमा
कार्यतालिका दोस्रो पटक संशोधन गर्ने सहमति भएपछि, संवैधानिक समितिको बैठक बस्दैछ
काठमाडौं,माघ १५। कार्यतालिका दोस्रो पटक संशोधन गर्ने सहमति भएपछि त्यस बिषयमा छलफल गर्न आज संवैधानिक समितिको बैठक बस्दैछ । समितिको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा कार्यतालिका संशोधनका बिषयमा
माओवादीले शान्ति र संविधान निर्माणमा वितण्डा खडा गरेको छ : थापा
विराटनगर, माघ १५। राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष एवं पुर्व प्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापाले जनसरकार कालमा गरेका कामलाई मान्यता दिने निर्णय गरेर माओवादीले शान्ति र संविधान निर्माणमा वितण्डा
प्रमुखदलका नेताहरु संविधानका विवादित विषयमा छलफल गर्दे
काठमाडौं, माघ १४। संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले आज दलहरुसंग छलफल गर्दैछन् । आचार्यले माओवादी, काँग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक
ट्रयाक्टर दुर्घटनामा परि एकको मृत्यु थप दुई घाईते
जुम्ला, माघ १४। जुम्लाको चन्दननाथ गाविसमा ट्याक्टर दुर्घटना हुदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन् | भे. १ त ३६७३ नम्बरको
मिनीट्रक दुर्घटना हुदा दुईको मृत्यु दश घाईते
नुवाकोट, माघ १४। बाराहीबाट काठमाडौ आइरहेको बा २ ख ३९ नम्वरको मिनीट्रक नुवाकोटमा दुर्घटना भएको छ। नुवाकोटको मदानपुर गाविस केउरिनीमा मिनीट्रक दुर्घटना हुदा दुई जनाको मृत्यु
माओवादीको जनसत्ताले गरेका निर्णयलाई मान्यता दिने सरकारी निर्णय किमार्थ मान्य नहुने : कोइराला
दाङ, माघ १४। नेपाली काग्रेसका सभापती शुशिल कोइरालाले माओवादीको जनसत्ताले गरेका निर्णयलाई मान्यता दिने सरकारी निर्णय किमार्थ मान्य नहुने बताएको छ । दाङको देउखुरिमा काँग्रेस कार्यकर्तालाई
एमाले निकट अनेरास्ववियूका विद्यार्थीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा
नेपालगञ्ज, माघ १३ । ए माओवादीको राज्यस्तरी प्रशिक्षणका लागि नेपालगञ्ज पुगेका प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईलाई एमाले निकट अनेरास्ववियूका विद्यार्थीले कालो झण्डा देखाएका छन् । दुई साताअघि सम्पन्न केन्द्रीय
४ वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेल आयोजना गर्ने सरकारको लक्ष्य
काठमाण्डौं, माघ १३ । सरकारले चार वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ठूलो खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै
Pages 132 : You are at page 87 of 132